DEG DEG+DAAWO: Midowga Afrika oo Soomaaliya & Kenya dhexdhexaadinaya iyo Soomaalida oo walaacasn.
MUQDISHO(P-TIMES)- Wararka naga soo gaaraya caasumada SOomaaliya ayaa sheegaya in uu halkaas soo gaaray Madaxweynihii hore ee dalka Koonfur Afrika Thabu Mbeki oo ah Ergay gaar ah oo ka socda Golaha Amniga ee Midowga Afrika, oo uu kala hadlayo Madaxda Soomaalida dhexdhexaadinta Kenya & Soomaaliya.
Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad, Wasiiro kale iyo Wakiilka Midowga Afrika ee Soomaaliya ayaa kusoo dhaweeyey madaarka magaalada Muqdisho ee caasumada dalka, waxayna hadda kulan la leeyihiin madaxda ugu sareysa dawladda, gaar ahaana Madaxweyne Farmaajo.
Wafdigan ayaa shalay booqday Nairobi, halkaasoo ay kula kulmeen Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta iyo Wasiirkiisa arrimaha dibadda.
Socdaalka wafdigan ayaa la sheegayaa inay la xiriirto arrimo kala duwan oo Gobolka ku saabsan, xiisada siyaasadeed ee Soomaaliya iyo Kenya, arrinta Muranka Badda oo Midowga Afrika doonayo inuu door nabadoonnimo ka qaato.